Daawo Sawirada: Guddoomiyaha iyo kuxigeenka Gaalkacyo oo la doortey . – idalenews.com
Daawo Sawirada: Guddoomiyaha iyo kuxigeenka Gaalkacyo oo la doortey .
Golaha deegaanka Gaalkacayo ee xarunta Gobolka Mudug ayaa maanta si rasmi ah u doortay duqa degmada Gaalkacayo iyo ku xigeenkiisa, kuwaas oo kala ah Cabdicasiis Maxamed Guuleed (Nugaal) oo loo doortey duqa degmada Gaalkacayo halka ku xigeenkiisana loo doortay Yacquub Maxamed Cabdalla ka mid ahaa suxufiyiinta muddo ka hawl geli jirey Soomaaliya.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali iyo qaar ka mid ah golihiisa xukuumadda ayaa ka qayb galay munaasabadda doorashada maamulka Gaalkacayo, taasi oo ka dhacday hoolka shirarka ee xarunta Xaawo Aadan.
Doorashada guddoomiyaha degmada Gaalkacayo ayaa waxaa ku tartamayay sadex xildhibaan oo kala ah Cabdullaahi Cabdiweli Gabayre, Xasan Maxamed Khaliif iyo Cabdicasiis Maxamed Guuleed
Wareegii hore ee doorashada waxaa ku tartamayay sadexda musharax, waxaana wareega labad u gudbay musharax Cabdicasiis Maxameed iyo musharax Xasan Maxamed Khaliif.
Wareegii ugu danbeeyey ee doorashada duqa degmada ee magaalada gaalkacayo ayaa waxaa ku guulaystay Cabdicasiis Maxamed Guuleed oo helay 15 cod, halka Xasan Maxamed Khaaliif uu helay 11 cod, iyadoo uu xumaaday 1 cod.
Ku xigeenka duqa magaalada Gaalkacayo ayaa waxaa utartamayay Yacquub Maxamed Cabdalla iyo Cabdi Cismaan Faarax, Wareegii hore ee doorashada Yacquub waxa uu heley 19 cod halka Cabdi Cismaan uu helay 8-cod, waxaana ku xigeenka duqa degmada Gaalkacayo ku guulaystay Yacquub Maxmed Cabdalla.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Max’ed Cali Gaas ayaa hanbalyo u diray masuuliyiinta kala duwan ee ku guulaystay hogaaminta maamulka degmada iyo masuuliyadda magaalada Gaalkacayo , wuxuun u sheegay in laga sugyo fulinta ballanqaadyadii ay sameeyeen.
Madaxweyne Gaas ayaa sidoo kale masuuliyiinta loo doortay usheegay in haddii ay fulin waayaan waxqabadka ay ballan qaadeen ay wareejin doonaan masuuliyadda saaran, isla markaana loo dhiibi doono cid kale oo ka bixi karta masuuliyadda degmada Galkacay.
Dhageyso: Maamul goboleedka 3da Gobol Ee Koonfur Galbeed oo shardi adag ku xiray wadahadal ay la galaan Maamulka Madaxweyne Madoobe Nuunow.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo waraaqihii aqoonsiga ka guddoomay Safiirka ‪Saudi‬ Arabia.